Drinks | Food Magazine Myanmar | Page 2
Basic Overnight Oat and Peach Pie
by Hsu Myat Oo for Food Magazine ပါဝင်ပစ္စည်းများ အုတ်ဂျုံ – ၅၀ ဂရမ် နွားနို့ – ၁၀ဝ ဂရမ် ဒိန်ချဉ် – ၅၀ ဂရမ် ပျားရည် – ၂ ဇွန်း (သို့) ....
Basic Overnight Oat and Apple Autumn Spice
ဘာလီအအေး (Barley Drink)
by Sofia for Food Magazine ယခုလို ပူအိုက်တဲ့ရာသီမှာ အထူးသင့်လျော်တဲ့ ဘာလီအအေးလေးပါ။ ပြုလုပ်ရ လွယ်ကူပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် များစွာအထောက်အကူ ဖြစ်စေတဲ့ ဗီတာမင်များစွာ ပါဝင်တဲ့အတွက် သောက်သုံးသင့်တဲ့ အအေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ စင်ကာပူရှိ အအေးရောင်းချသော ဆိုင်အတော်များများမှာတော့ ရောင်းချလေ့ရှိပါတယ်။ ရင်တွင်းအေးစေပြီး ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချလိုသူများအတွက်လည်း ....
Basic Overnight Oat and Banana Chocolate
မြေပဲ ပဲနို့ (Peanut Milk)
by Sofia for Food Magazine အာဟာရပြည်ဝတဲ့ပဲနို့ကို အလွယ်တကူဝယ်မရတဲ့နေရာတွေမှာ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်တဲ့ ပဲနို့ကို အိမ်မှာကျိုပြီး ကလေး၊ လူကြီး အရွယ်မရွေး သုံးဆောင်နိုင်ဖို့ လွယ်ကူတဲ့ ပဲနို့ကို ပဲပိစပ်နဲ့ ကျိုတာများသလို မြေပဲနဲ့ကျိုတဲ့ ပဲနို့လည်းရှိပါတယ်။ အခုကျိုထားတဲ့ ပဲနို့ကတော့ မြေပဲကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ....
Ginger Berry Spice
by Bartender Ko Aung Naing Htun for Food Magazine ဒီလအတွက် ဖျော်စပ်မယ့် Drink လေးကတော့ Mocktail Drink လေးပါပဲ။ မိုးတွင်းလည်းဖြစ်တာကြောင့် အေးစိမ့်စိမ့်၊ ချမ်းစိမ့်စိမ့်မှာ ပူရှိမ်းရှိမ်းအရသာကို ခံစားစေမှာပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ Blueberry – ....